Soo dejisan Lightworks 14.5 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Lightworks
Lightworks – tifaftiraha fiidiyowga oo taageera badi qaababka fiidiyowga ee dijital ah, codecyada kala duwan iyo plugins. Barnaamijku wuxuu isla shaqeyn karaa mashaariic dhowr ah oo ku yaal qaybo kala duwan oo si fudud u fududeynaya shaqada oo leh fiidiyowyo waaweyn iyagoo ka qaybqaatay qeybtooda. Daaqada edbinta ee Lightworks waa isku-dar ah labada goobood oo shaqeynaya si loo abaabulo cajalad fiidiyoow ah oo aad adigu xakameyn karto fiidiyowga iyo laba ileysyo maqal oo gaar ah oo bedelaya xawaaraha. Waxyaabaha loo yaqaan ’Lightworks’ waxay taageertaa waxyeello badan iyo fiilooyin loogu talagalay farsamooyinka dheeriga ah ee walxaha fiidiyowga ah, kuwaas oo loo qaabeyn karo loona qaybin karo qaybaha raadinta fudud. Lightworks waxay taageertaa SD, HD, 4K video, oo ay ku jiraan qaababka PAL iyo NTSC TV.
Taageerida qaabab kala duwan iyo codsiyada
Dhibaatooyinka muuqaalka iyo kala-guurka
Isku darka codka iyo fiidiyoowga xawaaraha saxda ah
Isbeddelka midabka iyo qaababka isku dhafka
Soo dejisan Lightworks
Faallo ku saabsan Lightworks
Lightworks Xirfadaha la xiriira